MENA: Tsy Hijab izany! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, عربي, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Español, English
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Septambra 2010)
Amin'ity Ramadan ity, dia natomboka ny fanentanana marobe mandrisika ny vehivavy hitafy, na hanitsy ny fomba fitafian'izy ireo hijab. Niteraka resadresaka teo amin'ny bilaogera ny fanentanana roa tahaka izany tao Iran sy Palestina.
Tsy zava-baovao ny fanentanana mamporisika ny vehivavy hiakanjo hijab; roa taona lasa izay, mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Tarek Amr, nitatitra momba ny fanentanana iray manokana izay toa nahasanganehana ireo bilaogera Ejiptiana.
“Ny vehivavy tsy misy hijab dia tahaka ny seza iray manana tongotra telo”, hoy ny vakin'ity sora-baventy ity.
Nitarika ny fahatezeran'i Nicole ao amin'ny Muslimah Media Watch.ny fanentanana Iraniana, izay manana ny tranonkalany manokana, miaraka amin'ny tsena antserasera. Nanoratra ilay bilaogera hoe:
Raha mbola tsy fantatrao fa hamonjy ny fanahinao manontolo ny fanaovana akanjo chador mainty ary handefa anao any amin'ny afobe ny fanaovana lokomena sy kiraro avo, ny “Vondrona Cyber ho an'ny Fampiroboroboana ny Fahadiovana sy ny Voaly [Ifaf]” ao Iran dia eto hamafa izany rehefa izany ho anao. Tohanan'ny governemanta Iraniana izy ireo ary manana tranonkala kanto izay ahitanao ny afisin'izy ireo, mividy t-shirts, ary mandinika ny lalànan'ny hijab ao Iran!
Nanadihady ny dikan'ny fanentanana, nanohy nilaza momba ny afisy eo ankavia izy hoe:
“Ny vehivavy iray tsy misy hijab dia tahaka ny seza misy tongotra telo” no zavatra tsy takatry ny saiko indrindra amin'ny afisy ho ahy, na ny hita maso na ny an-tsotratra. Nahoana no tongotra telo? Satria tsy feno izahay vehivavy raha tsy misy hijab? Tsy manana fototra mafy orina? Satria tsy afaka ampiasaina hipetrahana izahay? Afaka manao izany rehetra izany ny akanjo? Marina?
Nofintinin'ilay bilaogera hoe:
Ny vehivavy Miozolomana dia voatsikera foana amin'ny fitafiany sy ny endriny. Marina fa miaina ao anatin'ny fotoana mampatahotra isika. Na dia izany aza, betsaka ny vehivavy Miozolomana nahatsapa ho ambany, rehefa mahita ny olona fa ilaina ny manao fanentanana dokambarotra lafo kokoa mba hahazoana antoka fa mahafantatra tsara izay tokony hotafianay izahay. Mba hamantarana ny olana sy hanakorontana bebe kokoa ireo andalana ireo: “Ny tsy fananana haya (henatra/fahamaotinana) na manana fa kely, dia mariky ny fahamaizinantsaina, tsy fihamboana ho mahay izany, fa mariky ny tsi-fahalalàna fa tsy sivilizasiona” Koa aza manadino, ry rahavavy , fa ny maha Muslimah saro-kenatra dia ilaina mba ho marani-tsaina sy mandroso. Ary tsy afaka manana haya ianao miaraka amin'ny lokomena sy kiraro avo.
Mpamaky iray antsoina hoe Rochelle naneho hevitra tao amin'ilay lahatsoratra, hoy izy:
Mihevitra aho fa ity fanentanana ity dia mampiseho ny zavatra noezahako notantaraina nandritra ny fotoana maharitra: Olana lehibe any Iran ny tsy maintsy hanaovana hijab. Mieritreritra aho fa maro amintsika no leo amin'ny fiheverana ny hijab any andrefana ka mihevitra isika fa tsy miraharaha izany ny vehivavy Iraniana na tsy dia olana lehibe loatra ao Iran izany tahaka ny fahitan'ny tandrefana an'i Iran. Saingy valiako io fehin-kevitra io hoe: raha tsy “olana lehibe” ny hijab, nahoana ny governemanta Iraniana no mandany volabe, hery sy mpiasa amin'ny tsy maintsy hampiharana ny hijab? Mazava ho azy fa misy zavatra tsy mihetsika ao.
Ao Palestina, ny tanjon'ny fanentanana dia ho an'ny vehivavy efa mitafy hijab, saingy mitafy izany “tsy araka ny tokony ho izy”. Bilaogera Libaney Rita Chemaly mizara ny sary iray tamin'ireo afisy fanentanana, izay azony tamin'ny namana iray tany Palestina (eo ankavanana)
“So that your hjiab is proper,” reads the poster
Maneho hevitra ilay bilaogera hoe:
Toa miditra ao an-dalambe Palestiniana io fanentanana io.
Ao Libanona, zatra mahita olona mitafy voaly miaraka amin'ny endrika maoderina kokoa isika.
Na amin'ny endrika lamaody kokoa.
Araka ity fanentanana ity, tsy ampy ny fanaovana akanjo mihanjaka miaraka amin'ny saron-doha, ary manova ny dikan'ny voaly izany.
ny voaly dia tsy natao ho an'ny volo, fa ho an'ny famantarana ara-tsosialy, izay ilaina ny akanjo malama sy malalaka.
Ahoana ny hevitrao momba ity raharaha ity?